I-Golfer Jose Maria Olazabal Biography kunye neNkcukacha Zomsebenzi
Umhla wokuzalwa: Feb. 5, 1966
Indawo yokuzalwa: Fuenterrabia, Spain
Isiteketiso: "Chemma," igama lomnxeba weSpanishi elithi "Jose Maria," okanye "Ollie," elifutshane ku-Olazabal
U-Jose Maria Olazabal ngumqhubi omkhulu weqonga lobungama-2 obunomsebenzi wakhe ogqitywa yi- Ryder Cup impumelelo kunye nentambo yokulimala.
I-PGA Tour: 6
Uhambo lwaseYurophu: 23
I-Amateur yaseBrithani: 1984
Ilungu, iqela le-European Ryder Cup, 1987, 1989, 1991, 1991, 1993, 1997, 1999, 2006
I-Captain, iqela le-European Ryder Cup, ngo-2012
I-Europe Tour Rookie yoNyaka, ngo-1986
Ngo-1984, uJoseph Maria Olazabal wayinqoba i-Amateur yaseBrithani ngokubetha uColin Montgomerie kumdlalo wezemidlalo.
U-Olazabal kunye nelizwe lakhe uSeve Ballesteros baqulunqa ubudlelwane be-Ryder Cup eyaziwa ngokuba yi "Armada yaseSpeyin." U-Olazabal noBalterteros badibanise ukuzuza amanqaku angama-12 njengabalingani, ukuqulunqa irekhodi eli-11-2-2 kwiimine ezine kunye nezine ezineebhola- zombini iirekhodi ze-Ryder Cup.
U-Olazabal wadubula 63 kumjikelezo wesithathu we-PGA Championship ka-2000, okwenza ukuba abe yeqela legalufa elibanzi ukuze abelane ngerekhodi enkulu yechotho yokujikeleza.
U-Jose Maria Olazabal wayaziwa kulo lonke umsebenzi wakhe ngenjongo yokudlala isinyithi kunye nomdlalo omfutshane ocingayo, kunye nokuba ngumntu osesikweni kunye nokuphuma kwikhosi.
Wayeyaziwa ngokuba umdla wakhe onomdla kwiNdebe ye-Ryder yeQela laseYurophu. U-Olazabal wadlala kwii-7 ze-Ryder Cups, ngowokuqala ngo-1987 waza wagcina ngo-2006. Wadlala amanqaku angama-18 waza wathola amaphupha angama-20.5 kwiqela leYurophu, ebhala irekhodi ye-Ryder Cup ye-18-8-5.
Unolwazi olukhulu, u-Olazabal wabambisana noSte Ballesteros kwimigangatho eyi-15, i-duo iphumelele i-11 kubo ukudala ubudlelwane obuphumeleleyo kwimbali ye-Ryder Cup.
Ngo-2011, u-Olazabal wakhethwa ukuba abe ngumphathi weqela le-Europe kwi-2012 ye-Ryder Cup.
NgoFebruwari 4, 1966, e-Fuenterrabia, eSpeyin, Real Golf Club yaseSan Sebastian yavula umnyango wendlu ka-Olazabal. Ngomso olandelayo, uJose Maria wazalwa. Umkhulu ka-Olazabal wayengumgcini-mgcini wegalufa, kwaye kamva, uyise ka-Olazabal wathatha loo msebenzi. Umama wakhe wasebenza ekhatyini, naye, kunye noJose Maria batshaya iibhola zokuqala zegalufu ebudaleni beminyaka engama-2. Waqala ukudlala ngeenxa zonke kwinqanaba legalufa eli-6.
Ngaphambi kwexesha elide, u-Olazabal wayekhuphisana kwaye anqoba. Ngaphambi kokuba aphendule, wayenomdla wokuphumelela wamatye, kuquka nempumelelo eneminyaka eyi-17 kwi-Amateur Italian and Spanish Amateur, kunye ne-British Boys Amateur Championship. Xa eneminyaka eyi-18, waphindaphinda njengeSpeyin, uye wabulala uColin Montgomerie, u-5 no-4, ukuphumelela uMqhubi we- Amateur wase- Britan ka-1984.
U-Olazabal waphenduka eneminyaka engama-19 ubudala, waza wamphola i-European Tour Q-School ye-1985. Ngexesha lakhe le-rookie ka-1986, u-Olazabal wagqiba okwesibini kwirejista yemali ye-Europe Tour, wathatha iindibano ezimbini (ukunqoba kwakhe kokuqala kwaba ngo-1986 Ebel European Masters Swiss Open ) waza waqanjwa ngokuthi nguRokie of the Year.
Unyaka olandelayo u-Olazabal wadlala kwiNdebe yakhe yokuqala ye-Ryder eneminyaka engama-21.
Udlale kakhulu kwi-European Tour kwiminyaka ye-1980 kunye neye-1990, ekugqibeleni ngokugqwesa okwesibini kwirejista yemali kwakhona, ngo-1989. Wayenamanqanaba amathathu kwi-Euro Tour ngo-1990 no-1993. Ngo-1990, wafumana yokuqala ukuphumelela kwi- PGA Tour kwi- NEC World Series yeGalofu .
U-Olazabal wayengowesibini kwi- Masters ka - 1991 kwaye ngowesithathu kwi- Open Open ye - 1992 , kodwa ukuphumelela kwakhe kwenkqubela enkulu yenzeke kwi-Masters ka-1994. Wadla i-World Series yeGalofu kwakhona ngeli xesha kwaye wagqiba ngowesixhenxe kwi-USPGA uludwe lwemali naphezu kokudlala kwiivenkile ezisibhozo ze-PGA Tour.
Ngo-1995, u-Olazabal wafikelela kwiNombolo ye-4 kwizikhundla zehlabathi, isikhundla sakhe esiphezulu.
Umsebenzi ka-Olazabal wathatha ixesha elide ngo-1995, xa waphoqeleka ukuba asuse kwi-Cup ye-Ryder ngeenyawo nangentlungu. Ukususela kweli nqanaba phambili, ukulimala-ngokukhethekileyo intlungu yonyawo ngenxa ye-arthritis ye-rheumatoid - yayiyinxalenye enkulu yomsebenzi ka-Olazabal njengoko i-Ryder Cup yenziwe.
U-Olazabal waphupha yonke i-1996 kunye nxalenye ka-1997, kodwa wabuyela ngo-1998 waza waphumelela kwiTuro ye-Europe kwakhona. Emva koko, i- Jacket yesibili ye- Green nge ukunqoba kuma- Masters ka - 1999 . Kodwa u-Olazabal akazange aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde aphinde alwe neengxaki zenyawo. I-arthritis inomkhawulelane naye kwiintambo eziliqela nje zonyaka, kodwa ngeminye iminyaka wakwazi ukudlala ngokugcwele okanye ecaleni kwishedyuli epheleleyo.
U-Olazabal wadlala kakhulu kwi-PGA Tour kuma-2000-ubuncwane, ubuyele kwiNdebe ye-Ryder ngo-2006, kwaye uthumele i-wins of wins kusukela ngonyaka wama-1990.
Ngo-2009, wakhethwa kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama.
12 Iincwadi eziqhayisayo kunye kunye nabafazi
Ngaba amaYuda angawubhiyozela iKrismesi?
Isikhokelo soMnqophiso oqhelekileyo wemithi yaseNyakatho Melika
IiBritish nee-American Essays kunye neNtetho
Iifayile zokuSebenza zaseMedian
Imbali, Injongo, kunye nokuSebenza kwiNyanga yamaSilam yaseRamadan
Inkcazo yeGesi eyiNgcaciso kunye nemizekelo